Esemokwu 10 N'etiti Omuma na Social Media Marketing | Martech Zone
N’aka ya blog ahia, Robert Weller chịkọtara isi iri dị n'etiti mgbasa ozi ọdịnala na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na akwụkwọ Thomas Schenke Social Media Ahịa und Recht na nke a infographic.
Ndepụta a sara mbara, na-enye uru nke ọsọ, usoro, ịdịgide adịgide, nyiwe, iwu, ntuziaka, na agwa mmekọrịta. E nwere ọtụtụ ndị nduzi azụmaahịa ọdịnala na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụbọchị ndị a ka na-amataghị ọdịiche dị iche iche ma ọ bụ ghọta uru dị na ya - olile anya na ihe omuma a na-enyere aka ịkọwa akụkụ ndị bụ isi.
Tags: Omuma ahiainfographicrobert Wellerelekọta mmadụ media mere ziri ezielekọta mmadụ media na rechtthomas schenketoushennetoushenne.de
Ọkt 16, 2013 na 8:58 AM
Nke mbụ, daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta infographic m, enwere m obi ụtọ na ị hụrụ na ọ bara uru!
Nke abuo, emelitere m ya ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị karị. Ndo maka ịbụ ihe na-adịghị mma 😉 Ị ga-ahụ ụdị 2 na blọọgụ m (otu njikọ ị jiri na edemede gị).
Ọkt 16, 2013 na 1:41 PM
Dị egwu! Emelitere - daalụ Robert.
Ọkt 16, 2013 na 4:28 PM
Nọvemba 6, 2013 na 3:04 nke ụtụtụ
10 Ọdịiche Dị n'etiti Omuma na Social Media Marketing - nke a bụ ezigbo akụkọ. Anyị oge ụfọdụ na-achọ Ọdịiche n'etiti Classic na Social Media Marketing, na ebe a ka m nwetara azịza. Daalụ
Infographic bara uru nke ukwuu… (with reference ofc) ana m eji ya maka nkuzi m. Daalụ nke ukwuu!
Nov 28, 2016 na 10:11 ehihie
Ntụnyere na-adọrọ mmasị nke ukwuu gbasara ịzụ ahịa kpochapụwo na ahịa dijitalụ. Site na ịntanetị, anyị nwere ike iji obere mmefu ego wee nweta otu nsonaazụ ahụ. Daalụ maka ịkekọrịta.